Ukuze silungiselele ushokoledi yabo, kumele ngokuqinile athobele ubuchwepheshe ezithile. Kuze kube yimanje, zonke izingxenye zokuqala kumelwe ibhekane izigaba ezithile ukukhiqizwa. Omunye wabo - tempering ushokoledi - musa kube lula kangaka ekhaya. Kumelwe sibe kucace mayelana nenqubo kanye nesidingo ekwenzeni lokho okuhleliwe.
Ingqikithi yalo inqubo,
Ukuze kahle ukufeza tempering ushokoledi ekhaya, kubalulekile ukuqonda ukuthi kwenzekani nge imikhiqizo eziwumphumela ukucutshungulwa. Isakhi esiyinhloko uyaca kokuqala - kuyinto cocoa ibhotela. In the state oncibilikisiwe it has a liquid ukungaguquguquki viscous. Emva lwaluyophola, ingxube eqina. Uma inqubo isiphumile lokulawula, zinhlayiya letingemasayizi lahlukene akhiwa. Lokhu kubathinta kabi izinga umkhiqizo osuphelile. Tempering ushokoledi ekhaya ikuvumela cocoa ibhotela kancane kancane sibe esitebeleni kunazo. Umkhiqizo kuyoba lula ukusingatha. Ngenxa yalokho, crystallization kuyoba ngokulinganayo.
Ingqikithi yalo nqubo ukuthi mass ushokoledi iqale sishisiswe lokushisa ethile. Khona-ke kudingeka ukuthi kube cool kancane. Bese ingxube kwaphinde ngaphansi bafudumale. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka umkhiqizo izinga oyifunayo, okuyinto izogcinwa isikhathi eside ngaphandle izinguquko ezibonakalayo e oyiyo.
Ngaphambi kokwenza ushokoledi tempering ekhaya, udinga ukuba awaqonde ngokucacile imiphumela ukucutshungulwa ezinjalo. Ngenxa yalokhu inqubo kungenzeka:
Ukwandisa izinga lokushisa lapho imikhiqizo siphelile of ushokoledi iyogcwala amanzi ezandleni zakho. Lokhu kubaluleke kakhulu. Eqinisweni, bambalwa kakhulu abantu abafana, ezifana candy, okuyinto uzoqala zigcwale amanzi ngokushesha ukuxhumana iminwe.
Ngokwengxenye ukunqinda umkhiqizo osuphelile. Ngakho-ke kuyoba lula ukuphuma ukuma.
Ukuphungula kumiswa okuzenzakalelayo ezingemnandi ezifakwa olumhlophe phezu imikhiqizo siphelile ngesimo emapheshana noma izindawo.
Ukuze luhambe ngokushesha uhlelo lokugcina inqubo indlu. Ochwepheshe sinqume ukuthi ushokoledi omnene Uqinisa ngokushesha okungaka. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi endabeni lapho isisindo ezidingekayo ukwenza ukuma ezithile eziyinkimbinkimbi. Kukhona ngezinye izikhathi kuba isikhathi count by imizuzwana.
Ukunikeza umkhiqizo isicwebezelisi enhle. ayebuthaka Isici kwenza umkhiqizo ikhange nakakhulu.
umkhiqizo okunjalo ubukeka nice, iphula kahle futhi zingagcinwa isikhathi eside ekamelweni lokushisa ngaphandle izinguquko kubonakala isakhiwo.
Ukuze ukwelashwa okufanayo endaweni ukukhiqizwa, njengoba umthetho, wasebenzisa tempering umshini. Siqukethe esibuthakathaka ngaphakathi okuyinto ngokufanele idivayisi kuhlangana okuyinto esibethelwe Ukujikeleza ngu zomshini. Icala ifakwe ibhantshi umusi. Kusukela yakhe umsebenzi Ukushisa izakhi ezihlinzeka Ukushisa umkhiqizo ubekwe ethangini. Uhlelo izinga lokushisa oyifunayo noma ezinye nokuqalisa kungenzeka ukuhlela usebenzisa isilawuli ekhethekile akude. Iphinde wafingqa umusi jacket amapayipi yokwamukelwa amanzi abandayo bese sokukhipha kulahlwa udoti. Tempering imishini ezidingekayo ukuze unikeze viscosity umfaniswano mass ushokoledi, kanye ukuqinisekisa ukumelana mechanical umkhiqizo osuphelile. Le mishini ingase ibe khona ehlukile:
umthamo ukusebenza umthamo (kusukela 5 1000 amalitha);
Ngenxa umzimba eshukumisayo (isikulufa noma gwedla).
Kukhethwa kudivayisi luncike ivolumu ukukhiqizwa kanye nokuvama ukusetshenziswa.
Endaweni yasekhaya, ngokuvamile ezisetshenziswa kabanzi apharathasi compact ne stirrer kuze 1 kilogram.
Icubungula kwi setshe zemabula
Lowo othanda yena wahlanganyela Ukukhiqiza zonke izinhlobo amaswidi, azi ukuthi angasilawula kanjani lungadambisa ushokoledi ekhaya. Lokhu kungenziwa ngezindlela ezahlukene. Ngamunye wabo kunezinzuzo zako siqu. Omuny ungenziwa kuphela ukhethe esikahle kakhulu. Njengoba isibonelo, cabanga indlela usebenzisa ibhodi zemabula.
Umthamo kulungele shokolethe kuya 45 degrees.
2/3 uyaca wathela ungene setshe zemabula.
Ngokucophelela "bashayela" ebhodini nge spatula bese Pallets kuze umkhiqizo uqala crystallize. lokushisa Chocolate usakujabulela degrees 27. Hlola lokhu kungaba thermometer. Ukuze uphephe kungcono sebenzisa idivaysi ekhethekile nedivaysi laser.
Ungqimba iphathwa kudlule emuva emgqonyeni. Amazinga we ingxube safinyelela degrees 32. Kulokhu, kubalulekile ukuba ugovuze njalo.
Manje mass kungenziwa batheleka isikhunta, kodwa lapho umsebenzi kwenziwa ngendlela efanele, bese kuba emva kwemizuzu 3 Uqinisa.
Icubungula ku namabhati umusi
Uma kungekho ibhodi zemabula, ungazama okunye okukhethwa kukho. Ngakho, indlela lungadambisa ushokoledi ekhaya? Lokhu kuzodinga:
Inqubo kuhlanganisa izinyathelo ezilandelayo:
Chocolate kudingeka ezinqumela nquma futhi abeke izingcezu endishini.
Epanini uthele amanzi awubeka ukushisa low.
Phezu ke ukusetha isitsha ne chocolate ukuze wathinta phansi ketshezi. Kulokhu umkhiqizo yenu kuyovumelana kancane kancane ancibilike.
Uma mass iba liquid lokushisa yayo ifinyelela inani wayefisa, pan kumele asuswe ipuleti bese mpahla ithawula ukuze lilondoloze ukushisa. Okuqukethwe akufanele kwesikhathi lukhuni.
Ukwengeza imbewu endishini ucezu esiqinile ushokoledi ngaphambilini omnene.
Govuza spatula kuze lokushisa mass awufiki ezingeni oyifunayo.
Ngokulandelayo, ingxube lelungiselelwe Ungasavele usetshenziselwe ezinye izinjongo. Kungenzeka ukuba ugcwalise ifomu noma sculpt iyiphi sibalo, besebenzisa Amadivayisi ezikhethekile.
Kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi, ngesikhathi lokushisa ushokoledi tempering okuhambelana ezingeni oyifunayo. Uma kungenjalo, ngeke yonke imizamo sichithwe.
Kufanele kuqashelwe ukuthi i-isigaba ngasinye has ezahlukene lokushisa imibuso. Futhi izinhlobo ezahlukene ushokoledi abahluke kancane. Leli qiniso kufanele nakanjani kucatshangelwe ngaphambi kokuqala umsebenzi.
Temperature mode tempering inqubo yezinhlobo ezahlukene ushokoledi
№ p / p uhlobo ushokoledi Amazinga izinyathelo (degrees)
1 amnyama 47-50 27-28 30-32
2 White nobisi 44-45 25-26 29-30
Ukunamathela kwalezi zinqubo, ungathola ushokoledi ukuthi ngemva sokwelapha uzohlangana zonke specs. Ngemva ukwelashwa, kufanele uqale ukwenza isivivinyo esithile. Ukuze wenze lokhu ambalwa amathonsi ingxube ozofakwa ifilimu, itafula noma iphepha. Ngemuva kwemizuzu engu-5-7 kufanele lukhuni. Uma isiqeshana waphenduka bushelelezi futhi ecwebezelayo, umsebenzi angabhekwa igcwaliswe. Kungenjalo, kubalulekile ukuba usuphinda kuyoba.
Kukhona izindlela ezithile ushokoledi tempering, lapho indaba kokuqala zingaphendulwa zibe yizindawo yokuhlanganela mass noplastiki isicwebezelisi ezimnandi ngaphandle ukungcola nezingahlobene nendaba futhi inclusions. Ngo ukupheka, siyazi ongakhetha ezintathu eziyisisekelo:
Ebhodini ahlabayo ezenziwe ngemabula.
Ukusebenzisa kwenziwa phezu okugeza umusi (noma kubhayela double).
Esikhathini-microwave oven. Kulokhu, umkhiqizo phansi kumele kuqoqwe esitsheni akhethekile. Beka it kuhhavini kanye evuthayo at amandla aphansi. Njalo ngemuva kwemizuzu engama-15, izitsha kufanele kususwe kanye kahle uhlanganise ushokoledi kwancibilika. Ngesikhathi esifanayo kufanele kube encane izigaxa kanzima. Uma wonke mass iba liquid eyohlobo, amandla kudingeka aphume microwave kanye cool izinga lokushisa oyifunayo.
Kuphakathi yalezi zindlela kufanelekile ukusetshenziswa ekhaya. Ukukhethwa kwe-samuntu ethile kuzoncika ezintweni ezintathu:
inani umkhiqizo sokuqala (imiqulu encane kangcono ukusetshenziswa microwave);
khona endlini nezinto ezidingekayo;
Uma zonke lezi mibuzo izophendulwa, umsebenzi zingaqala.
Uma uwayehlalise akuyona non-contact thermometer ekhethekile, ungalilahli ithemba. Leli akulona isizathu ukulahla plan. Njengoba umkhuba ubonisa, kungaba lula kakhulu ukuze lelisu tempering ushokoledi ngaphandle thermometer. Kulokhu, kulingane ezivamile ekhishini thermometer. Luhle, isibonelo, ukusebenza setshe zemabula. Udinga nje uxhumane ingxenye yakhe elicwiliswe mass ushokoledi bese ulandela izinkomba ewashini. Nokho, akuwona wonke indlela enjalo ngendlela esilindele yakho. Phela, phakathi idivayisi nesilinganiso kumele uxhumane ne umkhiqizo, kodwa akuyona ngempela yokuhlanzeka. Abanye besifazane ukuthola enye indlela ngaphandle isimo. basebenzisa microwave oven Ukushisa kokuqala. Lapho, izinga lokushisa lingasethwa ngokuzimela futhi ukuqapha umphumela qapha. Ngezinye izigaba mass Ukushisa ezingeni iyenziwa ngesandla.
Ukuze wenze lokhu, udedele ingxube kufanele usetshenziswe udebe lwangezansi. Kuyinto isitho obucayi kakhulu futhi ebucayi zomzimba womuntu. I iconsi kufanele kube cool. Ngenxa lokushisa komzimba ovamile 36,6 degrees. isilawuli ezinjalo, empeleni lula kakhulu ukusebenzisa futhi akudingi imishini eyengeziwe izindleko.
Dolgoprudny - Izikhangibavakashi: Ubungane Park, isikhumbuzo amaqhawe ifilimu "Amaphoyisa". Kanjani ukuze uthole Dolgoprudny
Londoloza ngezinga elikhulu - yilokho "Vasap"!
Yini izimpahla ayikwazi wabuya nokuthi kuyafaneleka?
Wamafutha kusukela nemihuzuko kanye nezinye izindlela hematoma